Ajọ Ifufe Ophelia kụrụ Ireland taa na-agbasa ndekọ | Netwọk Mgbasa Ozi
Ajọ Ifufe Ophelia ugbu a
Oké ifufe ahụ Ophelia bịarutere Ireland taa. Obodo ahụ nọ na njikere ọbara ọbara, ebe a na-amarịrị ifufe siri ike nke ajọ ifufe ahụ. Isi elekwasị anya nke a na-atụ anya ịbata na elekere ole na ole sochirinụ, ga-agafe n'akụkụ ọdịda anyanwụ dum. Ifufe ikuku ga-erute England, a na-atụ anya na site n’abalị a ọ ga-amalite ịka njọ, mgbe ọ gafesịrị mba ahụ dum site na ndịda ruo ugwu. Ireland ga enwe oke mmiri ozuzo kachasị njọ kemgbe 1961.
Ajụjụ buru ibu n'uche onye ọ bụla bụ etu oke ifufe nke a ga-esi eru Europe. N'ezie, Ophelia dị nnọọ setịpụrụ ihe ndekọ ahụ dị ka ajọ ifufe mbu mbu ịmalite ma dekọọ na lonjituudu ebe ọwụwa anyanwụ a. Edebeghị ihe ịtụnanya a na mbụ.
Ọ bụ Ophelia bụ ajọ ifufe izizi mbụ dakwasịrị Europe?
Eburu amuma na awa 6-7
Ophelia abụghị naanị ajọ ifufe kpara mkpamkpa na Europe. Ajuju nke "Gini mere na odighi oke ifufe na Europe?" Ọ bụghị ihe ziri ezi. Ọ bụ ihe gbara gharịị ma dịkwa njọ, enweghị obi abụọ ọ bụla, ọkachasị n'ihi oke mmiri mmiri dị na oke osimiri nke na-ebute ibu iro nke oke oke ifufe ndị a. Ma ọ bụrụ na okpomoku zuru ụwa ọnụ na-aga n'ihu, ọtụtụ ndị ọkachamara kwenyere na ọ bụ ihe a na-ejighị n'aka na ọ ga-esi na ya pụta, nakwa na ọbụna ajọ ifufe nwere ike ịbịa n'ikpeazụ.
N’ileghachi anya n’azụ, anyị hụrụ Hurricane Faith nke rutere n’ụzọ adịghị ike na Norway n’afọ 1966. Gordon, nke dakwasịrị Azores na United Kingdom n’afọ 2006, dịka Faith, bụ ajọ ifufe ndị rutere Europe mgbe ọ gbasịrị Kọntinent America. Ha mere ya na obere ike, edemede 1. Na 2005 anyị nwere Vince onye banyere na mpaghara Iberian, na onye zụrụ azụ n'ụsọ oke osimiri Morocco. Ma ọ bụ naanị ha ka ọ dị ugbu a.
Ophelia si otú a ghọọ ajọ ifufe mbu buru ibu rutere Europe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ajọ ifufe Ophelia kụrụ Ireland taa na-agbasa ndekọ